Ukuphawula Okunekhono: West Baden | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 21, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
Umyeni wami, umqondisi wokudala omuhle futhi onethalente uSteve Nealy (ipulaki elingenamahloni), futhi ngichithe izinsuku ezimbalwa kuleli sonto e-West Baden Springs Hotel eningizimu ye-Indiana. Mangisho ngaphambi kokungena enyameni yalokhu ukuthi uma uhlala ngaphakathi kwedrayivu (noma ngisho nangaphezulu) kwaleli hhotela nakwezinye izindawo Indawo yokuhlala i-French Lick Springs futhi awukayiboni (noma ngabe unayo), kufanele uvakashele. Kuhle.
Njengomthengisi wezimakethe nomkhiqizo, ngangihlatshwa umxhwele kakhulu yi ukunaka umkhiqizo wabo. Womabili la mahhotela anemilando egciniwe efaka ukuvakashelwa yizicukuthwane zayo yonke imivimbo, kubandakanya oMongameli base-United States, abafike kule ndawo yokudlala ebabazekayo ekuqaleni kwawo-1900. Isanda kubuyiselwa ebuhleni bayo bokuqala, bona ayigcinanga imininingwane ekugcizeleleni izinto zomlando zomkhiqizo ngenkathi zinakekela izidingo zabahambi banamuhla. Isibonelo, ukulethwa okungenantambo kuyo yonke iWest Baden Springs Hotel bekungenabala. Bekungadingeki nginike iphenti legazi noma nginikele ngama- $ 10 ngosuku ukuze ngisayine. Bekufanele ngivume imigomo yokusetshenziswa kanye futhi iMacBook Pro yami encane ejabulile yabonwa kaninginingi esakhiweni.
Okuhle kunakho konke, ukuthi inhliziyo yami kasomaqhinga wami ifudunyezwe yi ukwamukelwa komkhiqizo okuqhubekayo engikuhlangabezane nakho ngakunye. Wonke umsebenzi oyedwa esihlangane naye kwakuyinxusa lokukhuluma elihambahambayo lomkhiqizo. Ngamunye wethu wanikela ngomlando othile futhi wakujabulela kakhulu ukusikhombisa indawo futhi wenza kamnandi iziphakamiso ezingezekile ukuze singaphuthelwa uhla lwezinto ezibonakala zingapheli okufanele sizenze.
Ngingaqhubeka ngiqhubeke ngemininingwane eminingi ebophele ndawonye lo mkhiqizo owenziwe kahle. Iphuzu lami ukuthi benza umsebenzi omuhle ngomkhiqizo wabo, sibheka kuwo wonke ama-nook abonakalayo futhi angaphatheki ukuqinisa ukuthi bangobani nokuthi bameleni. Abakwenzanga nje ngaphambi kokuthengisa noma lapho kuthengiswa khona. Basithambise ngomkhiqizo ngemuva kokuthengisa… bezihlelela bona ukumaketha ngegciwane, ukuthenga okubuyiswayo kanye nenani elikhulu kakhulu lamakhasimende lempilo yonke. Kubonakala sengathi kunesifundo lapho kithi sonke.
Ngishiye ngikhululekile, nginemilingo futhi ngilungele ukubuya ngokushesha okukhulu. Umaki omuhle, iWest Baden Springs Hotel neFrench Lick Springs Resort. Qina!
Tags: Ukufaka uphawuihhotelaentshonalanga baden
Awuyena Umsebenzisi Wakho
Nov 28, 2009 ngo-7: 01 AM
Siyabonga ngokwabelana ngalokhu. Eminyakeni embalwa edlule, ngangisebenzela iCook Medical ngaphandle kwaseBloomington. Le nkampani ibibambe (futhi bacabanga ukuthi basayenza) idili labo lenkampani lonyaka eWest Baden. Isakhiwo siyamangalisa. Uma uvakashela, qiniseka ukuthi ungena emagcekeni nasezivandeni. Ngempela kufanele uhambo.